Roa Taona Taorianan’ny Niafenany, Nandositra Tany Londra i Ali Abdulemam, Bahraini Bilaogera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Mey 2013 13:01 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, Français, Español, Ελληνικά, Italiano, English
Nipoitra tany Londra i Ali Abdulmam, Bahraini bilaogera, taorian'ny nandosirany tany Bahrain, izay toerana niafenany nandritra ny roa taona. Nandritra ny fitsaràna tsy natrehany, Abdulemam, 35 taona, dia voasazy 15 taona an-tranomaizina noho ny maha-mpikambanana azy anaty fikambanana mpampihorohoro ary koa saika hanongam-panjakana.
Nitantara ny fandosirany avy any Bahrain tamin'ny toerana miafina iray tao anaty fiara ny The Atlantic, nandeha niampitra tetezana iray mampitohy an'i Bahrain sy Arabia Saodita. Hatreo, nandray fiaramanidina ho any Koweit i Ali, ary mpanjono no nampita azy antsokosoko ho any Iraq. Avy eo niala an'i Basra ho any Najaf izy ary niondrana tamin'ny fiaramanidin'ny Iraqi Airways ho any Londra, izay nahazoany fialokalofana politika
Mpamorona ny tranonkala eo antoerana Bahrain Online na Barhaine eny anaty aterineto, Abdulemam koa dia mpanoratra ao amin'ny Global Voices Advocacy, rantsanay ho fiarovana ny fanehoan-kevitra malalaka.
Resaky ny mpisehatra anaty aterineto ny tantaran'i Abdulemam raha vao nivoaka ny antsipirihany.
Avy any Bahrain, miteny i Ahmed Ali hoe:
@ahmedali_: Mampalahelo fa tsy i Ali Abdulemam irery ihany no olona voalohany voatery nitsoaka ny fireneny. Ary tsy ho [izy koa] no farany.
Nizara ny ahiahy ifampizaràn'ny maro i Zuhair Al Ghatam :
@z_alghatam: Tsy hay lazaina ny fahasambarako mahafantatra fa tsy misy manahy ny amin'i Ali sy ny filaminan-tsain'ny fianakaviany, ary ny fahafaha-dry zareo mifankahita sy hiresaka aminy, toy izany koa ny fitrangàny mba hitondra ny fiovana goavana. Saingy tena mbola gaga aho nahoana no navoaka antsipirihany ny fandosirany
@z_alghatam: Angamba ny tantara mikasika ny fandosiran'i Ali Abdulemam azo hitarafana ny harefon'ny fitaovam-piarovan'ny fanjakana nefa fiantombohan'ny fanasaziana ireo mpandeha rehetra ihany koa amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny fepetra fisavàna/fiarovana.
Ary Hussain Yousif, ilay mpiara-mamorona ny “Bahrain Online”, izay sesitany ihany koa, dia mampitandrina :
@hussain_info: Ho an'ireo namanay [malala] any ampiafenana sy hazain’ [ireo manampahefana], antenaiko fa ny hafalianareo amin'ny fanambaràna ny fandosiran'ny namantsika Ali Abdulemam malala dia tsy hitondra anareo amin'ny tsy fahamalinana.
Ahodina mankany Angletera ny eritreritra , Freedom Prayers avy any Bahrain mibitsika hoe:
@FreedomPrayers: Nanana fihaonana tamin'ny mpanjakan'ny #UK ny mpanjaka #Bahrain androany. Nampahafantatra azy ve izy fa ny fireneny dia nanome fialofana politika ho an'ilay bilaogera fatra-mpanohitra azy?
Manampy izy hoe:
@FreedomPrayers: Raha toa #UK manaiky ny hanomezana fialofana politika toa an'ireo #Bahrain voampanga fa mpampihorohoro, nahoana no tsy lazaina izany mba hanajanonana ny sarintsarim-pitsarana sy hamoahana ireo gadra?
Ary manohy, ao anaty bitsika iray ho an'ny Ministeran'ny Raharaham-bahiny any Londra, manambara fa :
@FreedomPrayers: @foreignoffice misy gadra politika maherin'ny 1500 any #Bahrain tahaka an'i @abdulemam, hanome azy rehetra ireo fialofana politika ve ianareo? Izay ve no azonareo atao?
Tsiky manenika ny tava. Tonga tao amin'ny seranam-piaramanidina Gatwick ao Londra ilay Barhainy bilaogera, Ali Abdulemam. Sary nozarain'i @alaashehabi tao amin'ny Twitter
@alaashehabi: sarin'i @abdulemam raha vantany vao tonga tao amin'ny seranam-piaramanidina Gatwick soa aman-tsara izy taorian'ny làlana lavitra nialàna an'i #Bahrain pic.twitter.com/uHtA73aw2H
Manana ny ahiahiny hafa ihany koa ireo hafa toa an'ilay Ejiptiana mpibilaogy malaza Alaa El Fattah [ar]:
@alaa:Nandositra an'i Bahrain taorian'ny [roa] taona niafenana ilay Bahraini namako, Ali Abdulemam, mpiady ho an'ny fahalalahana. Hiarahaba azy ve isika noho ny fahafahany sa hampionona azy noho ny maha an-tsesitany azy?
Ary, avy amin'ny Etazonia, Josh Shahryar manontany tena hoe:
@JShahryar: Manontany tena aho hoe inona no hieritreretan'i Obama ny fandosiran'i Ali @Abdulemam avy any #Bahrain. Angamba, misaotra Andriamanitra fa tsy ny namany no nisambotra sy nampijaly azy?
Mandritra izany fotoana izany, voalahatra handray fitenenana ny Alarobia mandritra ny Fihaonambe mikasika ny Fahafahana tany Oslo i Ali Abdulemam :
@OsloFF: Ali @Abdulemam, bilaogera tsy hita nanomboka ny Martsa 2011, nandositra an'i Bahrain ary hiteny mandritra ny Fihaonambe mikasika ny Fahafahana ny Alarobia 15 May
Io no fisehoana voalohany amin'ny vahoaka ho an'i Abdulemam taorian'ny nandehanana niafina.
Ao amin'ny YouTube, mizara ity horonantsary ity ny RevolutionMCBahrain, mampiseho ny fanehoan-kevitra voalohany nataon'i Abdulemam, taorian'ny nandosirany :
Amin'io horonantsary io, mampanantena ilay mpibilaogy ny hanohy hiasa ho amin'ny fampiroboroboana ny fahafahana miteny sy fahavitrihany ety anaty aterineto “mandrapaha-tanterak'ireo fangatahan'ny olom-pirenena”